किन स्थगित गरियो ओमिक्रोन फैलिएका देशबाट आउनेलाई क्वारेन्टिन ? | Nepal Ghatana
किन स्थगित गरियो ओमिक्रोन फैलिएका देशबाट आउनेलाई क्वारेन्टिन ?
प्रकाशित : ६ पुष २०७८, मंगलवार १६:०१
कोरोनाको नयाँ भेरियन्ट ओमिक्रोन फैलिएका देशबाबाट आउनेहरुलाई अनिवार्य क्वारेन्टिन बस्न भनेको छ । क्वारेन्टिन बस्दा संक्रमण भएका व्यक्तिबाट अन्य व्यक्तिमा भाइरस नसर्ने भएकाले पनि क्वारेन्टिन संक्रमण निणन्त्रणको राम्रो विकल्प हो । अहिले भने यो निर्णय स्थगित गरिएको छ । क्वारेन्टिन बस्नु पर्ने व्यवस्था किन स्थगित गरियो ?
नयाँ भेरियन्ट भएका मुलुकमा भ्रमण नगर्न अध्यागमन विभागको अनुरोध